रिपोर्टर: ईश्वरी राई बाट सम्पूर्ण खबर
कोरोना महामारीबिच बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिला के भन्छन्?
चीनको वुहानबाट महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ का कारण सारा संसार अस्तव्यस्त भएको छ। नेपाल सरकारले पनि सम्भावित संक्रमण रोक्न भन्दै विगत चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने समुदाय परेको छ।
‘बेलैमा बिहे नगरेकोमा अहिले पश्चाताप लागेको छ’ (भिडियोसहित)
४६ वर्षिय सुवास लिम्बु हरेक दिन बिहान ७ बजे कोठाबाट निस्किएर भारी बोक्ने काम गर्दै आएको लामो समय भयो। विगत चैत ११ गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उनको यो पेशाले पनि विश्राम लिएको छ। यसअघि बिरामी हुँदा बाहेक आराम नगर्ने उनी हिजोआज पुरै फुर्सदिलो भएका छ
लकडाउनमा के गर्दै छन् रोहिंगा शरणार्थी? (भिडियोसहित)
चीनको वुहानबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गरेको छ। लकडाउका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने
बिहान उठेदेखि रातिसम्म बंगुरका पाठा स्याहार्ने तारा.... (भिडियो)
बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म मोरङ पथरीकी तारा राई बंगुरको स्याहार सुसारमा व्यस्त हुन्छिन्। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनमा पनि उनलाई कुनै फुर्सद छैन। बरू उल्टै समस्या थपिएको छ। पथरी घर भए
काठमाडौंको कपनमा साढे दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर डोमा शेर्पा तामाङ दम्पत्तिले व्यवसायीक माछापालन गरिरहेका छन्। विगत तीन वर्षदेखि माछापालनबाटै परिवारको गुजारा चलाइरहेका यी दम्पत्तिको दिन माछाको स्याहार सुसारमै बित्ने गर्छ। ३३ वर्षीय डोमालाई आफ्ना साथ
मजदुर दिवसमा समेत नबलेको गुरूङ दम्पत्तिको चुल्हो...
दैनिक बिहानको ६ बजेदेखि बेलुकाको ६ बजेसम्म काममा व्यस्त रहने गुरूङ दम्पत्ति आजभोलि फुर्सदिला भएका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस को संभावित संक्रमण रोक्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनले श्रीमती रीतासहित आफू पनि बेरोजगार भएक
लकडाउनले रोकिएको त्यो अनुसन्धान्....
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ गतदेखि लकडाउन गरेको छ। नेपालमा कोरोना सक्रमण फैलन नदिन गरेको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी काम गरेर परिवार पाल्ने समुदाय यतिबेला दोहोरो पीडामा छ। एकातिर रोगले आक्रमण गर्ला कि, भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर भोकले मर
लकडाउनमा कसरी बसिरहेका छन् दैनिक कमाएर खाने टेम्पु चालकहरू
चीनबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नेपालमा थप संक्रमण फैलन नदिन भन्दै सरकारले जारी गरेको लकडाउन आज ३२ औं दिनमा पुगेको छ। लकडाउनका कारण अधिकांशको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ। दिनमा कमाएर छाक टार्नेसहित मागेर पेट पाल्नेलगायतलाई लकडाउनले नराम्री प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै दैनिकजसो काम गरेर आफ्नो
यी युवा जसले दैनिक ८ सय मजदुरलाई निः शुल्क खाना खुवाउँछन् (भिडियो)
चीनको वुहानबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ। सम्भावित महामारीलाई रोक्न नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गरेर सबैलाई घरमै रहन आग्रह गरेसँगै सबैको दैनिकी परवर्तन भएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा दैनिक मजदुरी गरेर खाने मजदुर परेका छन्। जसलाई